आज हुदैछ यी ४ को भाग्य परिक्षा, तपाईको बिचारमा को बन्ला नेपालको ‘दोश्रो नेपाल आईडल’ ? - Enepalese.com
आज हुदैछ यी ४ को भाग्य परिक्षा, तपाईको बिचारमा को बन्ला नेपालको ‘दोश्रो नेपाल आईडल’ ?
इनेप्लिज २०७५ पुष ६ गते ९:३४ मा प्रकाशित
नेपाल आइडल सिजन २ को ‘फिनाले’ आज हुँदैछ । आज राति चारमध्येबाट एकजना ‘दोस्रो नेपाल आइडल’ घोषित हुने छन् । आइडलको फाइनलमा पुगेका रवि ओड, बिक्रम बराल, सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारी मध्येबाट एकजना आइडल हुने छन् । को बन्ला त आइडल ? निकै चासोका साथ हेरिएको यो प्रश्नको सत्य जवाफ आज नै भेटिने छ । प्रतिस्पर्धीको नेपाल आइडल अनुभव कस्तो रह्यो होला ? आगामी योजनाबारे के भन्छन् आइडलका चार प्रतिस्पर्धी ?
बाँकी भिडियो हेर्नुहोस्